“Ronaldo Wayne ayay xirfadiisu dabiici ahayd balse Cristiano Ronaldo…”. Ibrahimovic oo kala saaray labada Ronaldo – Gool FM
“Ronaldo Wayne ayay xirfadiisu dabiici ahayd balse Cristiano Ronaldo…”. Ibrahimovic oo kala saaray labada Ronaldo
(Europe) 30 Dis 2016. Waa sax in Cristiano uu boos ka helay xiddigaha ugu fiican ee soo maray kubbada cagta adduunka isagoo 4-jeer ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or ee laacibka ugu fiican dunida, balse Zlatan Ibrahimovic ayaa aaminsan in Ronaldo-hii reer Brazil uu yahay kan ugu fiican.
“Waxaan aaminsanahay in Ronaldo Il Fenomeno, uu ahaa kan ugu fiican,” Zlatan ayaa sidaa u sheegay ESPN ee Brasil.
“Aniga ahaan waxay tusaalo u ahayd waxa ay tahay kubbada cagta. Waxa kasta uu sameeyo waxay ahaayeen wax aad la cajabeyso. Sida uu u goynayo iyo sida uu u ordayo.
“Ronaldo wuxuu ahaa mid dabiici ah, waa lagu dhalay inuu noqdo waxa uu ahaa, ma ahan wax uu tababar u sameeyay si uu u noqdo, ciyaartoyda ceynkan oo kale ah lama sameyn waa lagu dhalay, waa naadir.
Ibra oo sidoo kale ka hadlaya Ronaldinho ayaa yiri: “Aniga iyo Ronaldinho waxaan ka soo wada ciyaarnay AC Milan, laakiin kuma uusan jirin waayihiisii wacnaa, laakiin waan jeclaysanayay marka aan wada ciyaareyno, wuu carari jiray isagoo ay tintiisu isku yaacsan tahay, si dhaqs leh iyo goortuu doono ayuu goynayay, dadka kale wuxuu ka dhigi jiray sida caruur hareerihiisa joogta.
Zlatan ayaa yiri mar uu ka hadlayay Ronaldo: “Ma wada ciyaarin aniga iyo Cristiano Ronaldo, way ka duwan tahay maxaa yeelay xirfadiisu waa natiijo ka dhalatay tababar adag, ma ahan mid dabiici ah.”.